တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: မျှော်လင့်ရတဲ့ နေ့ ...
Posted by မေဓာဝီ at 3:42 PM
မမေ ရေ ... ကျမတို့တွေရဲ့  ဒီနေ့ခံစားချက်တွေက ထပ်တူထပ်မျှပါဘဲ ... အဝေးကနေပြီး ၀မ်းသာလွန်းလို့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာရယ် ...
11/13/2010 3:54 PM
အားလုံးတိတ်တခိုးမျှော်လင့်နေရတဲ့ ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်ရည်ကျရတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။
11/13/2010 4:14 PM
အမြန်ဆုံး ပြည့်စေသောဝ် ...။
11/13/2010 4:19 PM
11/13/2010 5:34 PM
၀မ်းလဲ သာတယ်၊ ၀မ်းလဲ နည်းတယ်။ ဖော်မပြတတ်တဲ့ ခံစားမှုပေါင်းများစွာနဲ့ ....
11/13/2010 6:32 PM
ဒင်းတို့က.....စကောလောက်မပြောနဲ့ ဒန်အိုးဖုံးလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ကောင်တွေ..
11/13/2010 7:44 PM
ပြောရရင် ယုံမှာတောင် မဟုတ်ဖူး။ မနေ့ညက တညလုံး မအိပ်ပဲ ဒီသတင်းကို စောင့်နေတာ... အဖြူအမဲ သိရတော့မှ အိပ်ရာဝင်တာ အခုမှ နိူးတော့တာပဲ.... အခုဒီမှာ နေ့လည် ၁:00 ဟီးးးး
11/13/2010 9:09 PM
အမေစုရဲ့ ပုံတွေကို မြင်လိုက်ရတော့ ဘယ်လိုခံစားချက်မှန်းမသိဘဲ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်.. အရည်အချင်းရှိသူတစ်ယောက်ရဲ့ ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အချိန်တွေကို နှမြောမိလို့ပါ
11/13/2010 9:43 PM
11/13/2010 10:42 PM
တူတူ ဝင်ကူ ဆုတောင်းသွားပါတယ် ညီမမေ...:)
11/14/2010 1:27 AM
i'm so glad to free aunt suu
11/14/2010 3:14 AM
၀မ်းလဲ သာတယ်၊ ၀မ်းလဲ နည်းတယ်။
As Ko Gyi Kyaut said "ဒင်းတို့က.....စကောလောက်မပြောနဲ့ ဒန်အိုးဖုံးလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ကောင်တွေ "
I wish she get to meet her family soon and free for ever.
11/14/2010 6:52 AM
ဝေနေများစွာသတ္တဝါ အားလုံး ကိုယ်စိတ် ၂ ဖြာကျန်းမာ ချမ်းသာ ပါစေ။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်ခွင့် ရှိကျပါစေ...
11/14/2010 11:39 AM
ပျော်လွန်းလို့ သတင်းဆိုဒ်တွေတိုင်းကို အထပ်ထပ်ပါတ်ပြီးကို လိုက်ဖတ်နေတာ..။
11/14/2010 3:32 PM
ဒီလိုရက်တွေမှာ မေ့ရဲ့ဘလော့ကိုပစ်မထားပဲလာမယ်ဆိုတာသိလို့ ဖွင့်ကြည့်မိတာ မေ့ရဲ့စာသားလေးတွေကိုတွေ့သွားတယ်.မေပျော်သလိုအမေစုကိုချစ်သောသူအားလုံးလဲပျော်ကြပါတယ်.ကဗျာလေးကိုကြိုက်လို့ fbကသူငယ်ချင်းတွေအတွက် ယူသွားတယ်နော်.
11/14/2010 6:28 PM
ကဗျာလေးကလည်း ကောင်းလိုက်တာ စု လွတ်မြောက်တဲ့ အတွက်လည်း ဝမ်းသာလိုက်တာ
11/15/2010 3:28 AM
တို့လဲ အားလုံးနဲ့ထပ်တူ အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်
11/15/2010 5:39 AM